Ny Hova dia ireo olona ao amin' ny saranga anelanelany tao amin' ny Fanjakana Merina izay sady tsy mpanompo no tsy andriana. Ilazan' ny foko sasany eto Madagasikara ny foko merina tsy anavahana saranga koa ny hoe Hova. Ny Bara sy ny Betsileo ary ny Tanala dia manao hoe Hova ireo ataon' ny Merina hoe "andriana".
2.1 Ny Hova tao amin' ny foko sasany
2.2 Ny Hova tao amin' ny foko merina
Anaram-poko[hanova | hanova ny fango]
Voalohany, foko matanjaka nonina tany anivon' i Madagasikara ny Hova (lazaina ankehitriny hoe Merina). Porofon' izany, tamin' ny taonjato faha-18 sy faha-17 dia Ankova no anarana niantsoan' ny foko betsileo sy sakalava ary bezanozano ireo faritry ny foko hova fa tsy Imerina akory. Moa tsy Ampamoizankova no anaran' ny sisintanin' ny Hova sy ny Sakalava tamin' ny andron-dRanavalona I?
Anaran-tsaranga[hanova | hanova ny fango]
Ny Hova tao amin' ny foko sasany[hanova | hanova ny fango]
Ny Hova dia ilazana ireo andriana amin' ny foko sasany toy ny betsileo sy ny tanala ary ny bara.
Ny Hova tao amin' ny foko merina[hanova | hanova ny fango]
Amin' ny foko merina, ny Hova dia ilazana ireo tsy andriana nefa tsy mpanompo. "Vohitra" koa no ilazana azy amin' ny foko merina sy betsileo. Ireo hova tranainy dia taranak' ireo Vazimba voalohany nonina taty Imerina. Ifandovana ny maha-hova.
Maro tsara tarehy ny hovavavy ka maro aminy no tonga vadin' andriana sy niteraka taminy. Misy koa anefa ireo mpanompo nafahana ka tonga hova ary "hova vao" no fiantso azy. Noho io fifanambadiana teo amin' ny hova sy ny fisian' ny hovavao ary ireo efa taranaka hova dia maro ny razan' ny hova ka niteraka tsy fisiana endrika manokana teo amin' ny hova izany. Io fifangaroana be io ary dia niteraka ho karazan' olona vaventy mety ho lehibe ary saika tsy dia maranitr' orona ny hova. Ny hova koa dia mety ho fotsy malama volo, mainty ngita volo, zarazara, mangamanga, sns. saingy tesatesak' endry hatrany izy.
Maro amin' ny foko hova ary no misy ran' andriana saingy mijanona ho hova ihany izy. Tamin' Andriamasinavalona sy tamin' Andrianampoinimerina ary ireo mpanjaka nandimby azy dia efa maro ny hova natao ho isan' ny andriana toa an-dRaberanto tao Ambodifahitra izay natao ho Zanadralambo. Maro koa anefa ireo andriana no naetry ho hova.
Taty Imerina, ireo hovalahy dia nampiseho ny fahaizana mitondra fanjakana ka nanomboka tamin' Andriamasinavalona dia tsy azo nialana intsony izy ireo tamin' ny fitondrana. Nanomboka tamin-dRanavalona II aza dia lasa vadiben' ny mpanjaka mihitsy ny hovalahy (Rainilaiarivony) ary izy no mandidy sy manapaka fa saribakoliny ny mpanjaka. Maro koa anefa ny hova no manan-karena mihoatra ireo andriana ka nahatonga ny fitenena hoe "andrian-dreraka" na "andriana malahelo". Vokatr' izany dia tsy vitsy ireo olona no nifidy ny ho hova raha nampisafidiana na ho hova na ho andriana izy toa ny taranak' Ilehilava eo Ambohidrabiby izay maro taranaka tonga mpitondra fanjakana ankehitrio. Ankehitrio, hatramin' ny taona 1896 dia maro ireo hovavavy no manambady andriana aty Imerina ka efa miely amin' ireo fianakavian' andriana maro ireo ra hova. Maro koa ireo tanora no mametraka fa ny fitiavana no ambony indrindra ary tokony ho ambonin' ny resaka firazanan' ny razana fahiny. Misy tokoa ireo taranak' andriana ankehitriny no mifidy ny hanambady taranaka hova noho ireto farany kingakinga kokoa amin' ny resaka fihariana sady mivela-tsaina kokoa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hova&oldid=1043676"
Voaova farany tamin'ny 8 Febroary 2022 amin'ny 17:16 ity pejy ity.